Cuntadani waa qaybo ka mid ah websaydhka EatFresh.org. Waxaan jeclaan lahayn inaan u mahadcelino EatFresh.org oo nasiisay ogolaanshaha inaan kula wadaagno cuntooyinkan. Eatfresh.org waa mashruuc Leah's Pantry iyo Hay'ada Adeegyada Aadanaha ee Magaalada iyo Degmada San Francisco. Xayawaanka Leah waxay maamushaa horumarinta iyo dayactirka qalabka EatFresh.org, waxayna bixisaa taageero lamaane ah oo lagu fulinayo qalabka California.
Sida loo Isticmaalo EatFresh.org
EatFresh.org waa degel-saaxiibtinimo saaxiibtinimo oo USDA-ogolaatay oo dhiirigelin iyo qalab siisa dadka CalFresh iyo ururada u adeega. Waxay ka kooban tahay cuntooyin fudud oo qiimo jaban; iskudhaf kooxaysan “qorshooyinka cuntada” si loo yareeyo qashinka cuntada; talooyinka caafimaadka; macluumaadka helitaanka cuntada; iyo Weydii cunto yaqaanka. Websaydhka waxaa lagu heli karaa Ingiriis, Isbaanish, iyo Shiineys.